महिलाको दूधबाट आइसक्रिम | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← ‘ला फेरि विवाह गर्नु ? हाम्रो त विवाह भैसक्यो
मारी नदि घुम्दा…!! →
तर अब महिलाको दूधबाट बनेका आइसक्रिम पनि पाउन थालिएको छ । लण्डनस्थित एक आइसक्रिम पार्लरले पहिलो पटक महिलाको दुधबाट आइसक्रिम उत्पादन थालेको छ । ‘बेबी गग’ नाम दिइएको स्वादका लागि ७५ प्रतिसत मानब दुध र २५ प्रतिसत क्रिम प्रयोग भएको आइसक्रिममिष्ट रेष्टुरेन्टका संस्थापक म्याट ओकोनोरले बताए ।
मस्तिष्कको लागि समेत उपयोगी हुने बताउँदै ओकोनोरले एओएल न्यूजलाई भने, सुरुमा केहिले नाक खुम्चाए । तर प्रायः महिलाहरुले दुधको स्वाद चाख्न ‘बेबी गग’आइसक्रिम खाने गरेको उनको दावी छ । बच्चाको जन्मपछिको समय र खानाको आधारमा आइसक्रिमको स्वाद फरक पर्छ, उनले थपे ।
महिलाको दूधबाट आइसक्रिम बनाउन त्यति सस्तो र सजिलो भने छैन् । एक आउन्स दुधका लागि १.६१ डलर तिर्ने गरेको उत्पादकको दावी छ । स्वभाविक प्रश्न उठछ, त्यसो भए दूध कसरी संकलन गरिन्छ त ? ३५ वषिर्य भिक्टोरिया हिले एक यस्तै ‘दलाल’हुन जसले बच्चालाई दूध नचुसाउने र ब्रेस्टफिडिङमा समस्या भएका महिलाहरुबाट दुध संकलन गर्छिन् । यसरि दूध बेच्ने र संकलन गर्ने महिलाको ठूलै संजाल बनेको छ अहिले । बेबी गग आइसक्रिमको स्वाद लिन तपाईले २२ डलर खर्चिनुपर्नेछ ।